Kununurwa kubva pakutongwa
Chero bedzi nguva yeungano ichipera pano pasi, Nyasha dzinoshanda. Iye zvino chero munhu anogona kuuya kuna Jesu uye agoponeswa!
Chimwe chezvikonzero chinoita kuti vamwe vanhu vazivise zvisiri izvo kuti Mwari anotumira marongero ndechekuti vanozivisa mutemo. Uye nekuda kwemutemo uyu ivo vanogumisa zvisizvo kana kutambudzika kukuru kuchimuka.
Yakaburitswa kubva kuchisarudzo
VaR. 3: 16-18. Nekuti Mwari akada nyika nokudaro, kuti akapa Mwanakomana wake mumwechete, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave nehupenyu hwusingaperi. 17 Nekuti Mwari haana kutuma Mwanakomana wake munyika kuti atonge nyika, asi kuti nyika iponeswe kubudikidza naye. 18 Unotenda kwaari haapiwi mhosva, asi usingatendi watotongwa, nekuti haana kutenda kuzita reMwanakomana waMwari wakaberekwa mumwe woga.
Aya mativi ese anotidzidzisa kuti Mwari vakatumira Jesu kuzotiponesa - kutinunura kubva mukutongwa. Vanhu vese vanotongwa, asi vanosunungurwa pamutongo kana wagashira Jesu. Kana nekuda kwechimwe chikonzero iwe usingade kugamuchira Jesu, iwe unosara mukutongwa.
Zviri mukati meBhaibheri hazvitauri kuti Mwari anotumira marongero, asi zvinotaurwa neshoko nderekuti Mwari vakatumira Jesu kuzotiponesa uye nekutiponesa kubva mukutongwa. Hazvibvi zvebhaibheri uye zvinonyengera kuzivisa kuti Mwari ikozvino ari kutumira kutonga kuburikidza nedenda (senge coronavirus), hondo uye njodzi panguva yeungano nenyasha.
Mumoyo weBhaibheri watinoverenga unotaura pachena kuti Mwari haana kutumira Jesu kuti atonge nyika asi kuti ariponese.
Chokwadi, Mwari haafanire kutonga nyika nekuti yakatopedzwa! Uye kuti usunungurwe uye nekuponeswa kubva pakutongwa uku unofanirwa kugashira Jesu uye kuti uponeswe.
Jesu akatorawo mutongo akazviranga paakafa pamuchinjiko weKarivhari munzvimbo yedu. Zvino sezvo Jesu atora mutongo, isu tasunungurwa. Uye kusunungurwa takava nokutenda maari.
Kana isu ikozvino takasunungurwa nemutongo waJesu, ipapo Mwari haakwanise kuishandisa mutongo kwatiri. Jesu atozvitakura kare!
Chimwe chezvikonzero chinoita kuti vamwe vanhu vazivise zvisiri izvo kuti Mwari anotumira marongero ndechekuti vanozivisa mutemo . Uye nekuda kwemutemo uyu ivo vanogumisa zvisizvo kana kutambudzika kukuru kuchimuka.
Kuisa pamwe chiziviso chakadai, mumwe unoisa kubvutwa mushure mekutambudzika kukuru kwapera, izvo zvisiri zvebhaibheri. Ndiko kusvika kwavakaita mhedzisiro yekuti Mwari anotumira maratidziro kuburikidza nehurwere, denda, hondo uye njodzi. Asi Bhaibheri rinodzidzisa zvakajeka kuti zvinhu zvakadaro hazvibvi kuna Mwari.
Zvino pamwe munhu anogona kuwana rimwe reBhaibheri rakasununguka muTestamente Yekare, kana nenzira dzose, muTestamente Itsva izvo zvinogona kureva kuti Mwari achiri kutumira marutongeso, saka haumbofi wakawana chinhu chakadai panguva yeungano.
Kana iwe uchida kuvazivisa uye kusuwa, iwe unofanirwa kuzviita kune imwe nzvimbo kwete pano paApg29.nu. Nekuti pano pane ino blog webhusaiti, vhangeri raJesu Kristu uye sei kuti ungaponeswa sei hariziviswe - kwete dzidziso yenhema yekuti Mwari anotumira kutongwa nenhamo.
Shanduro dzeBhaibheri dzakasiyana sei nedudziro yaVaRoma 8: 1-4
Varoma 8: 1-4 Naizvozvo hakuzove nemhosva, kune avo vari Kristu Jesu . 2 Nekuti murairo wemweya unoshanda paupenyu hwaKristu Jesu wakandisunungura pamutemo wechivi nerufu. 3 Izvo izvo zvaisakwanisa kuitwa nemutemo, nekuti zvakapererwa nezvedu venyama, Mwari vakaita. Paakarega mwanakomana wake ave semurume anotadza uye akamutumira sechipiriso chezvivi, akashora chitadzo chiri mumunhu. 4 Saka zvinodiwa nemutemo zvekururama zvinogona kuzadzikiswa neavo vanogara nemweya wedu uye kwete nekwavo kwenyama. (Bhaibheri 2000)
Rom 8: 1-4 Ikozvino hakuchina kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu . 2 Nekuti murairo weMweya weupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamutemo wechivi nerufu. 3 Izvo zvainge zvisingagoneki kumurayiro, zvisina kusimba sezvazvakangoita nemutadzi, Mwari akaita nekutumira Mwanakomana wake sechipiriso chechivi, iye kunze aive akafanana nemurume mutadzi, uye mumuviri wake Mwari akapa mhosva zvivi. 4 Saka zvaidikanwa nemutemo kuti zvizadzikiswe matiri isu tisingararami maererano nenyama asi nemweya. (BSN)
Rom 8: 1-4. Naizvozvo, ikozvino hakuna kupiwa mhosva kune avo vari muna Kristu Jesu , vasingafambi maererano nenyama, asi neMweya. 2. Nekuti murairo weMweya weupenyu muna Kristu Jesu wakandisunungura pamutemo wechivi nerufu. 3. Nekuti izvo zvaive zvisingakwanisike pamutemo, nekuti zvaive zvisina simba kubudikidza nenyama, saizvozvo Mwari, paakatuma Mwanakomana wake nemufananidzo wenyama inotadza, uye nekuda kwechivi, akapa mhosva kuchivi icho munyama; matiri isu vasingararami maererano nenyama asi maererano neMweya. (KJV)
Vecka 19, måndag 10 maj 2021 kl. 21:06